Royal Secret Agent – Gold Channel Movies
Episode 11 Mar. 01, 2021
Episode 12 Mar. 08, 2021
Episode 13 Mar. 15, 2021
Episode 14 Mar. 22, 2021
Episode 15 Mar. 29, 2021
Episode 16 Apr. 05, 2021
Royal Secret Agents (암행어사: 조선비밀수사단)
KBS ကနေ ဒီတစ်ခါတော့ ရှေးခေတ်စုံထောက်ကားလေးကို ဇွန်ဘီစုံထောက်ကားအစား ပြသွားမှာပါ။ သရုပ်ဆောင်တွေတော့ မင်းသားချောလေး L၊ Itaewon Class ထဲက မင်းသမီးလေး Kwon Na-ra နဲ့ ယူတို့ရဲ့ အချစ်တော် ဂင်ချားနားတို့ကခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားလို့ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ကားလေးပါပဲ။
ဂျိုဆွန်းခေတ်နှောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ ကားလေးပါ။ Sung Yi-Gyeom (L) ဟာ အရာရှိစာမေးပွဲကို ပထမအဆင့်ကနေ အောင်မြင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ရှာဖွေရေးဌာနမှာ လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ဘာရည်မှန်းချက်မှမရှိပဲ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီး တစ်ရက်မှာတော့ လောင်းကစားမှုနဲ့ အဖမ်းခံခဲ့ရရာမှအပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ တော်ဝင်လျှို့ဝှက်စုံစမ်းရေးအရာရှိ အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရပါတော့တယ်။ သူရဲ့တာဝန်က လူကြီးမင်းတွေရဲ့ တရားမဝင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေကို စုံစမ်းဖို့ပါ။
သူ့ရဲ့ တာဝန်အသစ်ကို အပျော်မယ်ဟန်ဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးစုံစမ်းရေးမှူးအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Hong Da-In (Kwon Na-Ra) ရယ် သူ့ရဲ့အစေခံ Park Chun-Sam (Lee Yi-Kyung) တို့နဲ့ အတူဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ ဂင်ချားနားလေးက စကားများပြီး သံယောဇဉ်ကြီးမျက်ရည်လွယ်တဲ့ အစေခံလေးပေါ့။
Sung Yi-Beom (Lee Tae-Hwan) ကတော့ Sung Yi-Gyeom ရဲ့ အဖေတူ အမေကွဲ ညီဖြစ်ပြီး မိခင်ရဲ့ နိမ့်ပါးတဲ့ ကျွန်မျိုးရိုးကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ပစ်ပယ်မှုနဲ့အတူ အခွင့်အလမ်းတွေပါ ဆုံးရှုံးရသူပါ။ သူကတော့ အစ်ကိုဖြစ်သူကို ကန့်လန့်တိုက်ဆန့်ကျင်ချင်တဲ့ ညီဆိုးလေးနေရာက ပါဝင်မှာပါ။
ရှေးခေတ်ဇာတ်အိမ်အပြင် စုံထောက်ဆန်တာမို့ ကြည့်ရတာ မပေါ့ပါးဘူး မထင်ပါနဲ့။ ဂင်ချားနားပါနေတည်းက အမှုလိုက်ရင်း အလွဲများစွာနဲ့ စခွီထရဦးမှာပါ။ ဂျိုဆွန်းခေတ်ရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကို ဘယ်လိုစုံစမ်းပြီး ဘုရင့်ရဲ့ နားနဲ့ မျက်စိဖြစ်စေမလဲဆိုတာကို ဒီကားလေးမှာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာပါ။ အပတ်စဉ် တနင်္လာ အင်္ဂါတိုင်း GC Drama ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
Naing oo lwinApril 28, 2021Reply
can i download the zip file ?